Nacho Morato's profile in Ikkaro
Injeniera indostrialy avy amin'ny UPV (Polytechnic University of Valencia) manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana lojika sy fikarohana ary miaraka am-pijerena ny fianarana ny milina. Tiavo ny DIY na ny fomba fanaovana fiainana iray manontolo.
Ny sifotra sy kongresy kely no aretina ratsy indrindra mahazo ahy izao ao amin'ny saha. Olana lehibe io satria mamono ny voly izy ireo.
Miaraka amin'i ny rafitra padding vaovao mila mitandrina ianao satria toa tian'izy ireo be izany ary hamokatra be.
Misy fomba, vokatra ary teknika samihafa hiadiana amin'izy ireo. Androany aho tonga hilaza iray teknika hisorohana ny sifotra tsy hianika hazo na zavamaniry lava volo ary hevitra hanatsarana sy hampiasana azy amin'ny fomba bebe kokoa. Sasao izany mba hisorohana azy ireo tsy hiakatra amin'ny zavamaniry.
Ahoana ny fambolena amin'ny mulch ary tsy miasa tany
Isan-taona dia manana olana mitovy amin'ny zaridaina aho. Manamboatra ny tany izahay, efa mamboly aorian'ny herinandro vitsivitsy tsimparifary na ahitra adventitious no nibata ny zava-drehetra. Ankoatr'izay, tsy manana traktera aho ary tokony hiasa miaraka amin'ny hoe.
Amin'ity taona ity aho dia hiezaka hamaha ireo olana roa ireo. Nanandrana nanamboatra ny tany aho tamin'ny fanaronana azy amin'ny mulch ary navelako hamboly tsy hiasa. Ny valiny voalohany, araka ny ho hitanao, dia nampanantena.
Ahoana ny fampiasana indray ny tontonana masoandro ary ny mpanera
Mampiala efitrano fitehirizana hitako ity panneaux solaire taloha nampiasantsika taona lasa tao an-trano tamin'ny fahavaratra ity, raha mbola tsy tonga ny herinaratra. Nanana an'ity panneaux solaires ity sy batery fiara 2 na 3 izahay ary ny sasany (raha vitantsika) ho an'ny kamio. Nandritra ny andro dia nameno ny batterin'ny fiara izahay, miadana nefa tsy miova. Ary nampiasainay ny ambiny mba hanana hazavana amin'ny 12V eny fa na dia amin'ny fahitalavitra aza ireo 12V ireo.
About the Solar Arc ASI 16-2300. Manana sela 35 sy refy 1,225 mx 0,305m izy, izany hoe, 0,373625 m2
Ny fitsapana tamin'ny volana Aogositra teo anelanelan'ny 14 sy 15 tolakandro dia nahazo 20V sy 2A farafaharatsiny aho, noho izany dia miresaka herin'ny 40W P = V * I izahay.
Ary raha maka 40W amin'ny 0,37 m2 isika dia mitovy amin'ny filazana fa amin'ny metatra toradroa 1 dia hamokatra 40 / 0,373625 = 107,06 W / m2.
Fitsidihana ny lava-bato any San José sy ny tanàna Iberia
Tamin'ny 14 Aogositra izahay dia nanao an'ity fitsidihana ity niaraka tamin'ireo zazavavy. Na dia ny toerana malaza indrindra aza dia lAmin'ny maha Cuevas de San José anao sy ny ony ambanin'ny tany, 200m any an-tendrombohitra no misy ny tanànan'ny tanàna Iberiana-Romana, izay fananana tombotsoan'ny kolontsaina. Mety tsara raha manao ilay fitsidihana miaraka. Mazava ho azy, ho an'ny tanàna dia atoro anao ny mandeha miaraka amin'ny mpitari-dalana raha te hahalala zavatra iray ianao.
Mahavariana ny miaraka na tsy manan-janaka ary mety ny mandeha miaraka amin'izy ireo, tavela eo am-bava mandritra ny 40 minitra ny dia ary mamela antsika hanazava zavatra maro amin'izy ireo.
Ao amin'ny lava-bato dia tsy avelany haka sary izy ireo, raha tsy amin'ny fotoana iray ary ataontsika tsy misy jiro. Ka ny sariko sisa no avelako 2 ary ny sisa nalaiko tao amin'ny tranonkala ofisialy.
Hafanana ao an-trano, toetrandro ary toetr'andro
Ity lahatsoratra ity dia teraka vokatry ny lahatsoratra Mafana loatra ny miaina navoaka tao amin'ny National Geographic of July 2021 ary nosoratan'i Elizabeth Royte, izay ahitanao ireo olana ateraky ny hafanana be loatra amin'ny olombelona sy ny vatany, ny olan'ny fiakaran'ny maripana eto an-tany sy ny haitao famatsiana rivotra ary ny fanatsarana azy.
Misy olana lehibe. Mba hiadiana amin'ny mari-pana avo lenta sy ny vokany dia mila fampangatsiahana isika. Fa mandany herinaratra be dia be izy io ary maro ny olona, ​​indrindra ireo any amin'ny faritra mahantra, no mila izany.
Araka ny hita eo amin'ny sehatry ny olana, mampatahotra ny angona. Efa misy ny fandraisana andraikitra mitady fomba vaovao hampangatsiahana sy hanatsarana ny fahombiazan'ny fitaovana misy. Raha mitady tetikasa vaovao hanokanana ny tenanao ianao, ity dia mety hanampy olona maro.
Lohahevitra mitovy amin'izany no noresahina tao Ikkaro dia ny fananganana a vata fampangatsiahana miasa tsy misy herinaratra.
Zava-dehibe ny zavakanto. Satria ny eritreritra dia afaka manova an'izao tontolo izao.
Momba izany lahatsoratra nosoratan'i Neil Gaiman nandritra ny taona maro ary nasehon'i Chris Ridell ho an'ity boky ity. Nahita ilay boky tao amin'ny tranomboky aho ary tsy nisalasala naka izany. Efa fantatro i Neil Gaiman Coraline, for Ny boky fasana ary zavatra maro hafa ananako ao anaty lisitra nefa mbola tsy novakiako (Malagasy Andriamanitra, Sandman, Stardust, your Angano avaratra, sns). Chris Ridell tsy fantatro. Andraikitr'i Montserrat Meneses Vilar ny fandikana.
Tiako foana ny mamaky karazan-mpanoratra hafa mahaliana ahy, indrindra rehefa sanganasa, kaonferansa ary hevitra ananany momba ny fiainana sy ny haisoratra.
Zotero, mpanampy amin'ny fikarohana manokana
Izaho dia nitady fitaovana toy ny Zotero, izay ahafahako mandamina sy mitantana amin'ny fomba tsotra sy mahomby ny fampahalalana rehetra angoniko amin'ny lohahevitra mahaliana ahy, tetikasa tiako hiasa sy / na amin'ireo lahatsoratra hosoratako.
Ary na dia fantatry ny olona amin'ny maha mpitantana bibliôgrafia azy aza i Zotero ary efa ela no niasan'izy ireo, dia izy ireo ihany izao no mamaritra ny tetikasa ho Mpanampy amin'ny fikarohana manokana. Ary io no zavatra mahaliana indrindra hitako.
Topazo maso satria raha Mpamorona ianao na tianao ny miasa amin'ny tetikasa, mikaroka ary manangona vaovao amin'ny lohahevitra samihafa, dia ho raiki-pitia ianao.
pejy1 pejy2 ... pejy54 manaraka →